सरकार विरुद्धको यस्तो थियो कांग्रेस र एमाओवादीको तयारी - Hamar Pahura
सरकार विरुद्धको यस्तो थियो कांग्रेस र एमाओवादीको तयारी
आइतबार, बैशाख २६, २०७३ १५:३६:५५
काठमाडौं, वैशाख २६ गते । झन्नै सरकार फेर्ने तयारीमा रहेका नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीबीचको साँठगाँठले राजनीतिक बृत्तमा ठूलो हलचल ल्यायो । प्रमुख तीन दलबीचको आन्तरिक गम्भीर विषय पनि बन्यो ।
ओली नेतृत्वको सरकारलाई फेरेर आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने तयारीमा रहेका एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अन्ततः एमालेसँग नै नौबुँदे सहमति गरी कांग्रेसलाई लोप्पा खुवाए । त्यसलाई कांग्रेसले धोखाको संज्ञा दियो ।
कांग्रेस भित्र आन्तरिकरुपमा सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा प्रश्न चिन्ह पनि लगायो । अझै यो विषय सेलाइसकेको छैन । एमाओवादी र एमालेबीचको नौ बुँदे सहमतिको विषय त सार्वजनिक भइसकेको छ । बजेट पछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जेन्टलमैन एग्रिमेन्ट भएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर सत्तापक्ष दलका नेताहरुले त्यस्तो कुनै सहमति नभएको तर्क गर्दैआएका छन् ।
सरकार फेर्ने बहस ततातो भइरहँदा कांग्रेस र एमाओवादीको आन्तरिक तयारी के थियो ? भन्ने विषयमा जानकारी लिऔं ।
हस्ताक्षर हुन नसकेको तर चर्चित भएको हेरौं दुई दलबीच गर्न ठीक्क भएको सातबुँदे सहमतिको बुँदाः
४. वि।सं। २०७२ साल वैशाख १२ र २९ गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण लिई भूकम्पपीडितको राहत तथा पुनस्स्थापनाका लागि पुनर्निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने।
७. नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीको संयुक्त सरकार गठन गर्ने। दुबै दलको सहमतिमा संसदमा रहेका अन्य दललाई सरकारमा सहभागी गराउने। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने। ……महिनापछि वि.सं. ….. साल …… महिना ….. गतेदेखि संघीय संसदको निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने।